अनौठो संस्कार- राम्रो केटा पाउन कन्याहरुको शिर मुण्डन
गृहपृष्ठ » अनौठो संसार » अनौठो संस्कार- राम्रो केटा पाउन कन्याहरुको शिर मुण्डन
अफ्रिकालाई विश्वको चिडियाखाना त्यसै भनिएको होइन । यहाँ जैविक विविधताको उच्चतम रुप मात्र होइन मानवीय विविधता पनि पाइन्छ । यहाँका कतिपय आदिवासी जनजातिहरुको संस्कार तथा रितिथितिका बारेमा सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ ।
अफ्रिकाको केन्या, इथिओपिया तथा सोमालिया लगायतका देशमा झण्डै ५ लाखको संख्यामा बसोबास गर्ने बोराना आदिवासी पनि यस्तै अनौठो तथा रोचक आदिवासी समुदाय हो ।
अनौठो यस अर्थमा की यो समुदायका अविवाहित कन्याहरुको शिर मुण्डन गरिन्छ । विवाह नभएका युवतीहरुको टाउकाको मध्य भागमा गोलो आकारमा कपाल खौरिने चलन छ ।
अविवाहित कन्याहरुको यसरी बिचपाटे मुडेमा उनीहरुले राम्रो वर पाउने र घरबार पनि राम्रो हुने मान्यता यो आदिवासी समुदायमा रहेको छ ।
विवाह अघिसम्म यो आदिवासी समुदायका कन्याहरुमा आफ्नो कपालमाथि पूर्ण अधिकार हुँदैन भनेपनि हुन्छ । अभिभावकहरुले छोरीको सफल दाम्पत्य जिवनको लागि भन्दै छोरीको कपाल बीच भागमा खौरिदिने तथा अन्य भागको कपाल पनि खासै लामो बढ्न दिँदैनन् । विवाहपछि मात्र युवतीहरुले आफ्नो कपाल आफुखुसी बनाउन पाउँछन् ।
विवाहपछि भने युवतीहरुले आफ्नो कपाललाई चमकदार तथा नरम बनाउनका लागि घिउ लेपन गर्दछन् ।
अर्को रोचक कुरा त के भने यो समुदायका मानिसहरुले फोटो खिचाउन आनाकानी गर्छन् । फोटो खिच्दा जिउको रगत कम हुन्छ भन्ने विश्वास यिनीहरुमा छ ।
मन्दिरको तलाउमा श्रद्धालुले आफ्नै श्रीमतीलाई चुम्बन गर्दा मरणासन्न कुटे, समाज भन्छ यो ठिक हैन
ठ्याक्कै अमिताभ बच्चन जस्ता यी व्यक्ति को हुन् ? कोही अमिताभ नै दावा गरिरहेका छन्
तिब्बत हुँदै बग्ने नदीमा भेटियो संसारकै ठूलो माछा
सम्पर्कको बेला आँखामा पट्टी बाँधिदिन्थिन् :बिहेको १० महिनापछि थाहा भयो श्रीमान महिला रहेछन् !
१५ दिनकी सुत्केरी श्रीमतीलाई माइत पठाएर अर्को विवाह गरे, फेसबुकबाट श्रीमतीलाई थाहा भो !
आफूलाई टोक्ने त्यही सर्पलाई जब यी किसानले काँचै चपाउन थाले…
अब पोर्न भिडियो हेर्दा तलब पाइने, यी युवतीले तलब बुझिसकिन्
घरमै बोलाएर अत्याचार गरेपछि श्रीमानले श्रीमतीको प्रेमीको गोप्य भाग काटिदिएपछि….